Kana iwe uri kuda kuisa iOS 11, zvirinani kumirira yeruzhinji beta | IPhone nhau
Kuburitswa kweshanduro nyowani dzeApple's mobile operating system inowanzo tarirwa semvura muna Chivabvu neavo vanoda kuona zvichangoburwa muIpad kana iPhone software kutanga-ruoko. Nhau dzakapihwa panguva yechiitiko chanezuro, pamwe nezvimwe zvisina kutaurwa uye zviri kuwanikwa nekufamba kwemaawa, zvakasimudza mwero wekutarisira kumatanho anongowanikwa panguva ino yegore. Asi ipfungwa yakanaka kudaro kuisa iOS 11 izvozvi?
Mushure meinenge zuva riine yazvino vhezheni yeIOS pane yangu iPhone, mhinduro pfupi kumubvunzo uri pamusoro ndeye kuramba chinyararire mukutarisana nemamiriro ezvinhu. Kunze kwekunge iwe uchinyanya kufarira beta, kuisa yekutanga vhezheni yakatarwa nevagadziri kazhinji haisi imwe yemafungiro akanakisa, sezvo achiwanzo shungurudzwa nezvikanganiso zvidiki, kusagadzikana kwakawanda uye nebhatiri risingafungidzike.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti iyi beta yekutanga - kubva pane zvakaitika kwandiri uye nezvandakakwanisa kucherechedza kuburikidza nezvakaitika kune vamwe 'vekutanga-kutora' - haisi kuratidza kukundikana kukuru, kudzikira kwese kwese kunoonekwa, zviito izvo dzimwe nguva mira kushanda.basa, kupisa kupisa, nezvimwe ... Hapana chakakomba shure kwezvose, asi hakusi iko kuita uko munhu anotarisira mune chako chishandiso chemazana ema euro. Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti iyi vhezheni vhezheni haina kuwanikwa zviri pamutemo kune wese munhu, saka uchafanirwa kupa ako wega masokisi kuti uiise.
Kurudziro ndeyekumirira kusvikira Apple yaburitsa iyo yeruzhinji betas mumwedzi (zvishoma). Betas iyo, panguva ino, iwe unogona kurodha pasi nekunyoresa pa chirongwa ichi chinowanikwa pane webhusaiti yako. Panguva iyoyo mazhinji emakanganiso ekutanga aya anenge atogadziriswa uye iwe unozogona kunakirwa zvirinani chiitiko chekutanga neIOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kufunga nezvekuisa iOS 11? Pamwe zviri nani kumirira
Ndiri kuiyedza pachizvarwa chechitanhatu iPod touch uye bhatiri harigare zvachose, iyo iPod inopisa kupfuura kubva kumashure, inononoka ...
Ipapo iniwo ndaifanira "kurwa naye": Ini ndinovhura chimwe chinhu, anondivharira ini; Ini ndinoshandisa chimwe chinhu, anochimisa ... ...
Kubva pane zvandiri kuverenga, iyi beta inoisa imwe yehondo pane yekuita uye bhatiri nyaya. Asi kubva pane izvo zvandakakwanisa kuona, dhizaini yacho inoita senge yakanaka kwandiri. Ndinovimba kuti kana iri mune yakagadzikana vhezheni, ivo vanogonesa iyo bhatiri kushandiswa mune izvo zvinoshandiswa.
Zvinetso izvo iri kupa beta iri zvakajairika. Tinofanira kufunga kuti ndiyo yekutanga vhezheni mukati meIOS 11, iyo ine shanduko zhinji. Ndinokukoka iwe kuti uzviedze mune ramangwana, patinoenda kune beta 4 kana 5, iyo ichave i "yakagadzika" zvese izvi.
Gustavo Ochaeta akadaro
Uye kana ini ndatoisa, ndinoibvisa sei, kana sezvo iri yeruzhinji, ndinogona kuiisazve?
Pindura Gustavo Ochaeta
Unogona kubatanidza mudziyo wako pakombuta neTunes wobva wadzoreredza kune yazvino vhezheni vhezheni yeIOS 10. Kana iwe ukaita izvi, saka unogona kushandisa backup yakagadzirwa kubva kune imwecheteyo kifaa, asi haigone kugadzirwa kubva kune beta yeIOS 11. , asi iyo inofanirwa kugadzirwa kubva kuIOS 10.
Uye kana ini ndatoiisa, ndinoibvisa sei, kana sezvo iri yeruzhinji, ndinogona kuiisazve ?????
Unofanira kurodha pasi ips kubva kuIos 10.3.2 uye kubatanidza iyo iphone kuitunes uye kuiisa muDfu modhi (tangazve uye kana apuro rikaonekwa, buritsa bhatani remagetsi asi chengeta imba kana vhoriyamu pasi pane iphone 7) uye itunes ichaita wanikidza iyo iPhone mune dfu modhi uye iwe unoipa iyo kuti itangezve nekudzvanya iyo shif kiyi yeiyo pc panguva imwechete uye ichaita basa…. Ini ndinojekesa kuti iwe unogona chete kushandisa yekupedzisira backup yawakagadzira neios 10
Izvi zvinotojekesa chinhu chimwe chete kwandiri:
iOS yakava chinhu chezvekutengesa icho, gore mushure megore, ivo "kugadzirisa" ...
Ini handinzwisise kuti sei nyonganiso yakadaro. Isu tine iOS 10.3.2 yakanyatsogadziriswa ...
Nei iyo gehena ichichinjira iyo sisitimu iyo zvakare ichave izere nezvikanganiso?
Ndeipi pfungwa yekuti Apple inotora nguva pfupi yadarika? Ultra-inokurumidza yakarongedzwa obsolescence?
Tim Cook achivhura musangano mutsva gore rino, akati ichave mharidzo yakanakisa kusvika nhasi ...
Iyo beta, chii chaunoda kuenda pasina zvikanganiso? Mirira iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS11 muna Gumiguru uye ichanyatso shanda sezvainofanirwa kuita. Ini ndaisa iyo beta nekuti ini ndoda kuyedza asi ini ndatodzokera kuIOS10 mune angu matanhatu. Ini ndainonoka uye dzimwe nguva ndaive ndagurwa uye ini ndainzwa kunge ndisina kudaro parunhare rwangu.
Ini ndinofungidzira kuti ini ndichaisa iyo beta 3 kana 4 iyo ichave iri nani.
Chaizvoizvo. Yangu kuravira, Apple haimanikidze chero munhu kuisa iyo betas. Ndiye mushandisi wekupedzisira uyo anosarudza kana kuyedza masisitimu ayo achiri pasi pekuvandudza kana kwete.
Muchikamu iwe uri kutaura chokwadi, iwo mavhezheni matsva anovandudzwa nemamwe akawanda zvikanganiso. Dambudziko nderekuti kune vanhu vari kufinhwa kuti zvese zvinogara zvakangofanana, nekuda kweichi chikonzero ini ndinofunga kuti zvakakosha kuti uchinje. Parizvino tiri mubeta rekutanga reIOS 11, zvinova zvakajairika kuti "izere nezvikanganiso", asi zvese izvi "roll" zvema betas zvavanoita ekupedzisira kuvhurira veruzhinji uye vekupedzisira vashandisi, vhezheni zvakanyanya yakagadzirirwa uye isina mbichana. Saizvozvo, kana yangoburitswa, Apple ichaenderera ichitsvaga zvingangoita zvikanganiso zvidiki uye zvekuchengetedzeka zvikanganiso, nekuda kweichi chikonzero tinogashira vhezheni dzerudzi rweIOS 11.XX, uye nekuvandudza kutsva kunogona kuiswa mune ino sisitimu, iOS 11.X.
Ichokwadi kuti inopa kutadza, asi pamusoro penyaya yebheteri. Ini ndichaenderera mberi nebeta kusvika kune anotevera ayo achavandudza bhatiri zvakare. Izvo zvakafanana zvakaitika nebeta reIOS 10.
Apple inotangisa zviziviso zviviri zvitsva kusimudzira iyo Pro Pro